दश बर्षमा १० उर्जामन्त्री, लक्ष्य महत्वकांक्षी उपलब्धी शुन्य
मुलुकमा २०६३ पछि दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन भयो । यो सँगै औद्योगिक–व्यावसायिक गतिविधि बढ्न थाले । जनसंख्या वृद्धि र बस्ती विस्तारमा आएको तीव्रतासँगै देशमा विद्युत् माग पनि बढ्यो । तर, विद्युत् उत्पादनको शताब्दीसम्म पनि देशको माग धान्न सक्ने गरी देशमा विद्युत् उत्पादन हुन सकेन । संविधानसभाको पहिलो निर्बाचनसँगै मुलकमा १० जना उर्जामन्त्री बने तर विद्युत उत्पादन क्षमतामा भने सोचेअनुरुपको विकास हुन सकेन् ।
मुलुकमा लोडसेडिङमुक्त तिहार मनाउन लागिएको पनि तीन वर्ष भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिनबाट परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख सहरलाई लोडसेडिङमुक्त गरेको थियो । यसरी गरिएको परीक्षण सफल भएपछि लोडसेडिङको मार खेप्नु नपरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दावी छ । पहिलो संविधानसभाको निर्बाचन सम्पन्न भएपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारका जलस्रोत मन्त्री थिए विष्णु पौडेल । त्यसपछि उनीसँगै अन्य नौजना उर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री बनेर प्रवेश गरे । २०६५ देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाल अझैं विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन् ।
१० बर्षमा को को भए त उर्जामन्त्री ?
–उमाकान्त झा– २०६९
–जर्नादन शर्मा– २०७३
–बर्षमान पुन– २०७५
१० बर्षको अवधीमा १० जना मन्त्री मुलुकमा फेरिए । तर यो अवधीसम्म आइपुग्दा नेपालमा कुल १ हजार ७३ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ । काम गर्छु भन्दै आएका अधिकांश मन्त्रीहरुले खासै सफलता भने हात पार्न सकेनन् । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने सबै मन्त्रीहरु काम गर्नका लागि लक्ष्य बोकेर आएको तर विभिन्न कारणले काम गर्न असजिलो भएको बताउँछन् ।
त्यसो त २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको थियो । तर २०७५ सम्म आइपुग्दा मुलुकमा सरकारी आयोजनाबाट ५ सय ८ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ५ सय १२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । उत्पादित विद्युतले अपुग भएपछि सरकारले भारतबाट ३ सय ५० मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ ।
कुन मन्त्रीले के काम गरे ?
–गोकर्ण विष्ट : विद्युत महशुल नतिर्ने ग्राहको लाइन कटौती
–जर्नादन शर्मा : लोडसेढिङको अन्त्य
–बर्षमान पुन : औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेढिङको अन्त्य
यता, २०७३ साल भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले तीनवटा तिहारलाई झिलिमिलि बनाए । बर्षौंदेखि जकडिएको उर्जा क्षेत्रमा चुनौतीका चाङ भएपनि निर्देशक घिसिङले लोडसेडिङ हुन नदिने अठोट गर्दै आएका छन् । उनले सबैको प्रयासमा मुलुकको उर्जा क्षेत्रमा केही काम गर्न सकेको बताए ।
प्राधिकरणले मुख्यतया सञ्चालन, प्राविधिक, माग पक्ष र टिम वर्क मिलाउन सकेका कारण मुलुकबाट सदाका लागि लोडसेढिङको अन्त्य भएको दावी गर्छ । तर, मुलुकमा १० बर्षमा उत्पादन भएको विद्युत मुश्किलले ५ सय मेगावाट नाघेको छ । जुन लक्ष्यको निकै कम उत्पादन हो ।